ရန်ကင်းရှိငှါးရန်တိုက်ခန်းများ | iMyanmarHouse.com
1 သိန်း မှ3သိန်း ထိ ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိငှါးရန်တိုက်ခန်းများ
ရန်ကင်း ၊ ၀ါဝါ၀င်းအိမ်ရာ တွင် အလွှာနိမ့် အခန်းသန့် များငှားရန် ရှိပါသည်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18370386 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
MP Real Estate Service ပိတ်ရန်
ရန်ကင်းမြို့နယ် ရန်ကင်းစင်တာအနီး တိုက်ခန်းလေး အမြန် ငှါးမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18362859 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18329208 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ရနျကငျး သံလမျးမှတျတိုငျအနီး တိုကျခနျးငှားမညျ ၆လှာ ၁၇ပေ ၅၀ပေ အိပျခနျးတဈခနျး အဲကှနျးတဈလုံး အငှားစြေးနှုနျးမှာ ၂သိနျးခှဲကပျြဖွဈပါသညျ C2...
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18325801 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မွနျမာပလာဇာအနီး တိုကျခနျး ငှားမညျ.
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18268723 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
12တနျး တိုကျခနျး ပထမထပျ ငှားမညျ.
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18097490 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Rental apartment @ Yankin
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18420644 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18368223 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
One Room available to rent near Myanmar Plaza, Yankin Township ( NO AGENT Required ! )
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18367147 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18361861 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်